Ciidamada Kenya Oo Gacanta Ku Dhigay Gaari Xamuul Ah Oo Soomaaliya Usoo waday Walxaha Qarxa | Radio Muqdisho
Ciidamada Kenya Oo Gacanta Ku Dhigay Gaari Xamuul Ah Oo Soomaaliya Usoo waday Walxaha Qarxa
Published on June 22, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 1,325 views
Saraakiisha Booliska dalka Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay Gaari xamuul ah oo Soomaaliya u soo siday 27-tan oo ah Kiimikada laga farsameeyo walaxaha qarxa kaas oo ay Booliska ku qabteen Degmada Wajeer ee Gobolka W/Bari Kenya.
Wararka ka imaanaya degmada Wajeer ee waqooyi-bari Kenya ayaa sheegaya in Booliska Kenya ay qabteen Baabuur Xamuul ah oo ay saarnaayeen 27 tan oo ah Kiimikada walxaha qarxa laga sameeyo oo la sheegayo inuu ku soo wajahnaa dalkeena Soomaaliya.
Afhayeenka Booliska Kenya Masood Mwinyi Masudi, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in ciidanka Booliska Kenya ay baabuurkaasi qabteen, wuxuuna sheegay in haatan ay wadaan baaritaanno la xiriira baabuurkaasi iyo walxaha saaran.
Ciidamada Kenya ayaa tan iyo markii dabayaaqadii sanadkii 2011 gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya, waxaa gudaha dalkaasi ka dhacayay Qaraxyo, dilal iyo Afduubyo loo gaysanayay Ajaanibta u shaqeysa hay’adaha Caalamiga ee dalkaas ka howlgala.
Gaarigan siday waxyaabaha Kimakada ah ee laga sameeyo Qaraxyada ayaa la rumeysanyahay in uu u rarnaa maleeshiyaadka Shabaab si ay ugu sii wadaan qaraxyada iyo xasuuqa ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed.
muuse muude afrah says:	June 22, 2013 at 7:56 pm	ciidamada kenya weey ku mahad sanyihiin sida eey ubabbaadiyeen umad badan oo laxasuuqi lahaa, ciidamada soomaaliyana sidaa oo kale ayaa laga raba